Md, Xasan Shiikh oo sheegay ineey diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan Al-shabaab
Home Somali News Somali Government Md, Xasan Shiikh oo sheegay ineey diyaar u yihiin wadahadal ay la...
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in doowladiisa ay diyaar utahay kooxda Al-shabaab oo iyadu dagaal kula jirta Ciidamada doowlada iyo kuwa AMISOM, waxaana uu meesha ka saaray in wadahadalkaas ay qayb kanoqon doonaan xubnaha kujira liisaska Caalamiga ah, ama danbiyada kasoo galay dalalka Caalamka.
Madaxweynaha ayaa mar uu wareysi siinayay wakaalada wararka dalka Qatar u faafisa ee “Qana” ayaa waxa uu sheegay in doowladiisa ay diyaar utahay wadaxaajood lala galo shabaabka meel dhexaadka ah islamarkaasna aan danbiyo waaweyn ka galin dalka iyo wadamada Caalamka.
Madaxweynaha ayaa ku cel celiyay in aysan wax wadahadal ah la gali doonin shaqsiyaad dhibaatooyin farabadan ka galay dalka, sida kuwa ajnabiga ah ee aan u dhalan Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Shiikh, ayaa sheegay ineey jiraan dhalinyaro Al-shabab u galay ineey ka helaan dhaqaale oo kaliya, waxaana uu sheegay in doowladiisa ay ku dadaaleeyso sidii ay dadkaas uga soo saari lahayd Al-shabaab.
Madaxweynaha, ayaa wareeysigiisa kusoo gaba gabeeyay in kulan uu layeeshay amiirka dalka Qatar ay kawada hadleen sidii doowlada Qatar ay uga qayb qaadan lahayd soo celinta amaanka dalka Soomaaliya.
Xasan Shiikh oo sheegay ineey diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan Al-shabaab